Ural တောင်တန်းသို့ခရီး | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ရုရှားနိုင်ငံ
ယင်းမှ Ural တောင်များ သူတို့ကစဉ်းစားနေကြသည် ဥရောပနှင့်အာရှအကြားသဘာဝနယ်စပ်။ ၎င်းတို့သည် ၂,၅၀၀ ကီလိုမီတာခန့်ရှိပြီးရုရှားနှင့်ကာဇက်စတန်တို့ပိုင်ဆိုင်သောလှပသောတောင်များဖြစ်သည်။ ၎င်း၏မြေဆီလွှာများသည်ကျောက်မီးသွေး၊ ရေနံ၊ သံစသည့်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာအတွက်ဘဏ္treာများကိုဖုံးကွယ်ထားသဖြင့်areaရိယာတစ်ခုလုံးသည်နှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Urals တွင်အမြင့်ဆုံးနေရာသည် ၁၈၉၅ မီတာမြင့်သော Narodnaya တောင်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ အလွန်မြင့်မားသောတောင်တန်းများရှိသောတောင်တန်းဒေသတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်း၏အမြင့်သည်မြင့်မားသောကြောင့်၎င်း၏အမြင့်သည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်တွင်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ပျံ့နှံ့သွားသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Ural တောင်တန်းများနှင့်၎င်းတို့အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာရန်သွားသည် ခရီးသည်.
1 Ural တောင်တန်းများ
2 Ural တောင်တန်းများတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်း
တောင်ကုန်းများ သူတို့ကКараပင်လယ်ကနေအထိဆိုက်ဘေးရီးယားမြောက်ဘက်အာတိတ်ရေခဲမြစ်သမုဒ္ဒရာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၊ အဆိုပါ kazakh စတက်လွင်ပြင်ရန်, ကာဇက်စတန်မြောက်ဘက်နှင့်ရုရှား၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြက်ခင်းပြင်ဖွင့်လှစ်။ မြောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိကျွန်းများဖြစ်သောနယူးဇီဘလာကျွန်းနှင့်ဗိုင်းဂတ်ကျွန်းတို့ရှိသည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ အမြင့်ဆုံးတောင်သည် Narodnaya တောင်ဖြစ်ပြီး ၁၈၉၅ မီတာတွင်ရှိသည်ထိပ်တွင်အချို့သောရေခဲမြစ်များရှိသည်။ Ural တောင်တန်းများ ငါးကဏ္sectorsများသို့ခွဲခြားထားတယ်: The အာတိတ် Uralsမြောက်ဘက်, ကောင်းစွာ Subarctic UralsNarodnaya သည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။ က မြောက်ပိုင်း Urals, အပြိုင်ကွင်းဆက်; က အလယ်ပိုင်း Urals, အနိမ့်နှင့် တောင်ပိုင်း Uralsချိုင့်နှင့်အတူ။
Ural တောင်တန်းများတွင်ဥမင်များ၊ ချွန်ထက်သောကျောက်များနှင့်မြစ်များစွာရှိသည်။ သူတို့၏ရှုခင်းများသည်အမြင့်နှင့်အကျယ်အ ၀ န်းအရကွဲပြားခြားနားသည်။ သတ္တဝါများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, Urals နေရာဖြစ်သည် ဝံပုလွေ၊ ဝံပုလွေများ၊ ဝံပုလွေများ၊ ဝက်ဝံများ၊ တဟာရှများ၊ grouse များ၊ မြက်ပင်များ၊ ဇီးကွက်များ၊.
Urals ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးတောင်တန်းများတစ်ခုဖြစ်သည် နှင့်ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ၏အဆိုအရ၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်း ၂၅၀ မှ ၃၀၀ ခန့်အတွင်းရှိစူပါတိုက်ကြီး Euroamerica သည်ကာဇက်စတန်၏အသစ်စက်စက်နှင့်အားနည်းသောတိုက်ကြီးနှင့်တိုက်မိသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ကခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုနှစ်သန်းပေါင်း 250 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Ural တောင်တန်း၏တောင်တန်းရှုခင်းများသည်အံ့သြစရာကောင်းသည် ပြင်ပခရီးသွားလုပ်ငန်း။ ရုရှားဘက်မှာခရီးသွားအေဂျင်စီတွေအများကြီးရှိတယ် Perm ပြည်နယ်လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအားလုံးနှင့်အတူခရီးစဉ်ကိုမည်သူစီစဉ်နိုင်သည်။ ခရီးစဉ်၏ကမ်းလှမ်းချက်အမျိုးမျိုး မြင်းစီးခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းများပါ ၀ င်သည်။ ပါမန်းသည် ၁၇၂၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောအလွန်ကြီးမားသောစက်မှုစင်တာဖြစ်သည်။
အ မြစ်လမ်းလျှောက် ၄ င်းတို့သည်လူလေး ဦး အတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရပြီးရေလမ်းကြောင်းမှတောင်များ၏အလှအပကိုခံစားနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝကျစွာပျော်မွေ့နိုင်ခြင်း၊ အဆုံးမဲ့ကျေးရွာများနှင့်သစ်တောများကိုတွေ့မြင်ခံစားနိုင်ခြင်း။ Perm တွင်အနည်းဆုံးမြစ် ၄၀ ရှိပြီးဤလေ့လာရေးခရီးအတွက်သင့်လျော်သည်။ သို့သော်အကျော်ကြားဆုံးမှာ Koiva မြစ်နှင့် Vishera တို့ဖြစ်သည်။
လုပ်နေတာ၏ထိုအချိန်က တောင်ကြီးမြို့ ရုရှား၌၎င်းသည်တောင်းဆိုမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ အကွာအဝေးများသည်ရှည်လျားပြီးထိတွေ့မှုမရှိသောသဘာ ၀ များစွာရှိသည်။ အလွန်တင့်တယ်လှပပြီးတစ်ခါတစ်ရံတစ်နေ့တည်းတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲတတ်သည်။ တောင်တက်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာများမှာ Basegi အမျိုးသားဥယျာဉ်ပါမင်မှကီလိုမီတာ ၂၀၀ အကွာတွင်ရှိပြီး၊ Vishersky ပြည်နယ် Reserve ။ နှစ် ဦး စလုံးနေရာများအတွက်လေ့လာရေးခရီးနောက်ဆုံးရက်။
၏လမ်းလျှောက်သည် နိုင်ငံကျော်ဖြတ် ဒီမှာဆောင်းရာသီအရမ်းခက်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။ အေးခဲသည်။ မော်စကိုတွင်ပါဝင်သည့်ခရီးများသည်လေးရက်မှဆယ်ရက်အထိကြာနိုင်သည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့်ဥရောပနှင့်အာရှအကြားနယ်စပ်ပါဝင်သည် Toplaya Gora တောင်ခေါ်ဆိုမှု Tsar ရဲ့တံခါး Karst ကျောက်၊ Koiva မြစ်၊ Chudesnitsa ဂူKhrustalny ၏အေးခဲနေသောရေတံခွန်များ။ ။ အခြားလူကြိုက်များသောဒေသတစ်ခုမှာပါမင်မှကီလိုမီတာ ၃၀၀ အကွာတွင်ရှိသည့် Krasnovishersky isရိယာဖြစ်သည်။
ရုရှားဘက်မှစစ်ဆင်ရေးများ၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သော Perm နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာ Kama မြစ်၏အခြားတစ်ဖက်တွင်သေးငယ်သည်။ Nizhnaya Kurya ကျေးရွာ ဒီမှာစုရုံးတဲ့မြင်းခြံဖြစ်ပါတယ် မြင်းစီးခြင်း။ အရွယ်အစား၊ မျိုးစုံနှင့်ဖြတ်သန်းခွင့်ရှိသောတိရိစ္ဆာန် ၃၀ ရှိပါသည်။ မည်သို့စီးရမည်ကိုမသိသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များအတွက်လမ်းညွှန်များနှင့်ကမ်းလှမ်းသည်။ ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်ရက်ပေါင်းများစွာလမ်းကြောင်းများရှိသည်။
ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအရ Perm သည်ရုရှား၏ဥရောပဘက်ရှိအကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားသောတိရစ္ဆာန်များ (ဝံပုလွေများ၊ မြေခွေးများ၊ လင်းနပ်များ) ကိုရှာဖွေရန်အမဲလိုက်သည့်နေရာများစွာရှိသည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံလည်းအလွန်ထိပ်တန်းနိုင်ပါတယ်။ ပြည်နယ်သည်ရုရှားတွင်မြစ်ချောင်းများနှင့်မြစ်များအများဆုံးရှိသောကြောင့်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်တူညီသည်။ သင်ရောက်ရေချိုငါးမှငါးကြင်းအထိငါးမျှားနိုင်သည်။ ဇွန်လမှအောက်တိုဘာလအထိငါးဖမ်းရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာကမာမြစ်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအေဂျင်စီများသည်အတွေ့အကြုံရရန်ကမ်းလှမ်းသည် dacha အတွေ့အကြုံ, ပုံမှန်ရုရှားနွေရာသီအိမ်သူအိမ်သား။ Dacha ရာသီသည်မေလမှစက်တင်ဘာလအထိဖြစ်ပြီးလူ ၄ ယောက်အထိပါ ၀ င်သည်။ dacha တွင်နှစ်ရက်နှင့်တစ်ညတည်းလှေလှော်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ တော၌မှိုများကောက်ခြင်း၊ နေပူခြင်း၊ ရေကူးခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို Perm ၌ကမ်းလှမ်းထားသော်လည်း Ural တောင်တန်းများသည်တစ်ခုတည်းသောခရီးမဟုတ်ပါ။
Ural တောင်တန်းမှာအခြားနေရာတွေရှိသေးလား။ ကောင်းပြီ၊ Yekaterinburgလူ ဦး ရေသန်းတစ်ဝက်ခန့်ရှိပြီး ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကတည်းကခရီးသွား relatively ည့်သည်များသာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အာရှတိုက်ရှိအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးသစ်တောများနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ စက်မှုဇုန်သည်အစွန်အဖျားတွင်ရှိသောကြောင့်မြို့တော်သည်သစ်ပင်များနှင့်အဆောက်အအုံများနှင့်တန်းစီ။ ကျယ်ပြန့်သောလမ်းအနေအထားရှိပြီးချောချောမွေ့မွေ့သောပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ ဤတွင်လှပသောသူတော်စင်အားလုံး၏အသွေးတော်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည်ရွှေရောင်အမိုးခုံးတည်ရှိရာနေရာဖြစ်သည် Tsar Nicholas II နှင့်သူ၏ဇနီး Alejandra တို့သည်သူတို့၏ကလေးငါး ဦး နှင့်လုပ်ကြံခံရသည်.
၏ခံတပ် နင် ၎င်းသည် ၁၇၃၆ ခုနှစ်မှစ၍ မြို့တစ်မြို့တွင်လူ ဦး ရေတစ်သန်းကျော်နှင့်အတူတူပင်အမည်တူသောမြို့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Urals တောင်ဘက်တွင်ရှိပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်အနုပညာပြတိုက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ Orenburg ၎င်းသည် ၁၇၃၅ ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့သောစက်မှုဇုန်သေးငယ်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပြတိုက်များစွာရှိပြီး၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သင်အမဲလိုက်နိုင်သည်၊ ငါးဖမ်းနိုင်သည်၊ ဂူများ၊ မိုင်းများနှင့်ကျောက်မိုင်းများသို့သွားရောက်နိုင်သည်။
အဆိုပါအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ Ural တောင်တန်းသဘာဝတွေ့ကြုံခံစားရန်အလွန်ကြီးစွာသော ဦး တည်ရာဖြစ်ကြသည် အပြည့်အဝလှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်လျှင်သစ်တောများမှလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကြယ်များကိုကြည့်ခြင်း၊ ကြီးမားသောရေကန်များရှေ့တွင်ရပ်နားခြင်းနှင့်ကမ္ဘာသည်စကြဝinာတွင်အလှပဆုံးနေရာဖြစ်သည်ဟုခံစားမိလျှင်၊ Ural တောင်တန်းများကသင့်ကိုစောင့်နေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ကြည့်ဖို့ဘာလဲ » Ural တောင်တန်းသို့သွားပါ